စင်ကာပူနိုင်ငံရောက် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရသည့် မြန်မာသင်္ဘောသား (၃၀) ဦးအားပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့.......... - YTV
Home » Programs » News » စင်ကာပူနိုင်ငံရောက် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရသည့် မြန်မာသင်္ဘောသား (၃၀) ဦးအားပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့……….
စင်ကာပူနိုင်ငံရောက် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရသည့် မြန်မာသင်္ဘောသား (၃၀) ဦးအားပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့……….
Breaking News, News September 9, 2020 8:06 pm
နိုင်ငံတကာခရီးသည်တင် လေယာဉ်များပျံသန်းမှု ယာယီရပ်ဆိုင်းထားခြင်း
ကြောင့် စင်ကာပူနိုင်ငံရောက် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရသည့် မြန်မာသင်္ဘောသားတွေကို ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်...
စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ကစင်ကာပူနိုင်ငံရောက် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရသည့် မြန်မာသင်္ဘောသား (၃၀) ဦးအားပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တာပါ...
စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ ညပိုင်းအချိန်မှာ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်...
အခုလို စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိနေပြီး အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ မြန်မာသင်္ဘောသား (၃၀) ဦးအား မြန်မာသံရုံး နှင့် သက်ဆိုင်ရာသင်္ဘောကုမ္ပဏီတို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း charter flight စင်းလုံးငှား လေယာဉ်နဲ့ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရာ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ ည(၁၀) နာရီ မိနစ် ၃၀အချိန်မှာ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်...
အဆိုပါ စင်ကာပူနိုင်ငံရောက် မြန်မာသင်္ဘောသားတွေအနေနဲ့ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို ရောက်ရှိချိန်မှာတော့ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး၊ ကျန်းမာရေးစိစစ်ရေးနှင့် (၂၁)ရက်တာ အသွားအလာ ကန့်သတ် နေထိုင်ရေးတို့ကို အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့မှ သက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍအလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်...